Ciidamo Turki ah oo Waqooyiga Suuriya lagu dilay iyo Ruushka oo Shacab Xasuuqay.
Ciidamo katirsan dowladda oo ku dhintay weerar ka dhacay Sh/Hoose.
Abiy Axmed oo xaalad degdeg ah soo rogay kadib markii uu faafay COVID19.
Wararkii Ugu dambeeyay: Carona Virus oo wali halaag ka geysanaya wadamada Yurub iyo Mareykanka.
Dhageyso: Dowladda Federaalku Ma Fursad Bay u Aragtaa Xiritaanka Dugsiyada Qur'aanka Kariima Ah?.
Monday February 10, 2020 - 20:20:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Tobanaan qof shacab muslimiin reer shaam ah ayaa dhintay tira kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib duqeymo aan kala sooc laheyn oo diyaaradaha dagaalka ruushka ay ka geysteen gobollo dhaca waqooyiga wadanka suuriya.
Wararka ka imaanaya galbeedka iyo koonfurta gobolka xalab ayaa sheegaya in ugu yaraan 27 qof oo ubadan haween iyo carruur ay dhinteen, khasaaraha ugu daran wuxuu ka dhacay degmada al-ataarib kadib markii diyaaradaha nidaamka ay halkaas fuustooyin walxaha qarxa lagasoo buuxiyay ku tuureen.
isbitaalka guud ee degmada ayaa shaqada gabay waxaana magaalada ka socda barakac aad uxooggan, ciidamada al-asad oo ay kaabayaan maleeshiyaadka shiico ah ayaa markii lagu wiiqay jabhadaha dagaalka waxay bilaabeen in ay shacabka rayidka ah xasuuqaan.
dhinaca kale 8 qof shacab ah ayaa dhimatay kadib markii gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay lagu weeraray magaalada cafriin ee dalka suuriya, saraakiisha caafimaadka waxay sheegayaan in gaarigu ku qarxay waddo hareer marta saldhig ay ku suganyihiin maleeshiyaadka mucaaradka ee daacadda u ah turkiga.
Maleeshiyaadka malaaxidada kurdiyiinta oo magaaladan sanad ka hor laga qabsaday ayaa larumeysanyahay in ay qaraxaan mas'uul ka yihiin.
dhinaca kale kooxaha mucaaradka oo taageera ka helaya melleteriga turkiga ayaa bilaabay olole dagaaleed ay dib ugu qabsanayaan deegaanno dhowr ah oo dhaca baadiyaha bari ee gobolka idlib.
Wariyaal ayaa soo sheegay in howlgalkan ay ka qeyb qaadanayaan kumanaan dagaalyahan waxaana dhanka madaafiicda goobta ku taageeraya melleteriga turkiga, ujeedka olole dagaaleedkan ayaa lagu sheegay qabsashada magaalooyinka saraaqib macaratu nucmaan oo ah laba magaalo oo istiraatiiji ah.
Wasaaradda difaaca dowladda Turkiga waxay xaqiijisay in 5 askari looga dilay weerar madaafiic ah oo ciidamada Nidaamka Bishaar Al Asad ay ugeysteen saldhig turkigu ku leeyahay garoonka Tanfatanaaz ee duleedka magaalada Saraaqib.
Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda dabadhilifka turkiga ayaa sheegay in ciidamo dheeraad ah ay udireen suuriya ayna fulin doonaan balankoodi ahaa in ay waqooyiga Suuriy ka hirgeliyeen aag ka caaggan dagaallada oo ay deegaansadaan malaayiin qof shacab barakacayaal ah.
Ciidamo katirsan dowladda oo Dhakhtar caan ah ku dilay degmada Yaaqshiid.
Carona Virus oo laba qof Itoobiyaan ah ku dilay magaalada Addis Ababa.
Dagaal ay ku hoobteen ciidamo Xabashi ah oo dib uga qarxay gobolka Gedo.
Sedax qof Shacab ah oo ku dhintay duqeyn ay diyaaradaha Mareykanka ka geysteen degmada Jilib.